Ukhangele umhlaza webele - aasraw
/Iziphumo zophando ze "umdlavuza webele"
isikhundla 07 / 18 / 2018 阿斯劳
I-Lapatinib powder ividiyo ILapatinib powder eyisiseko Impawu: Igama: I-Lapatinib powder I-CAS: 231277-92-2 I-Formula ye-molecular: C29H26ClFN4O4S Isisindo samathambo: 581.05 Melt Point: 136-140 ° C Isilondolozo sokugcina: Isifriji Umbala: Umhlophe okanye umhlophe umgubo omhlophe we-Crystalline 1 .Izithuba zeBuykerb eziphambili. Igama leTykerb Cas 231277-92-2 I-Formula ye-molecule I-C29H26CIFN4O4S Isisindo somzimba 581.05 Umbala oMhlophe okanye umhlophe weCristalline [...]
imveliso 09 / 20 / 2018 阿斯劳
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-Fulvestrant (CAS 129453-61-8), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Ipulvestrant powder yintsebenziswano ye-estrogen yokumelana nayo. Ngokungafani ne-tamoxifen (eneempembelelo ze-agonist) kunye ne-aromatase inhibitors (eyanciphisa i-estrogen efumaneka kwiiseli zesisu), i-fulvestrant ibophelela ngokukhuphisanayo kwi-estrogen receptors kumaseli omhlaza wesifuba, okubangela ukuba i-estrogen receptor deformation ne-estrogen ibophe.
AASraw unani kuyondelelaniswe kunye nemveliso nako ukusuka gram ukuya ubunzima Formestane (CAS 566-48-3), phantsi komqathango CGMP kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho zibonwe.
Formestane oiwder kwakuyindlela yokuqala yokukhetha, uhlobo I, i-steroidal aromatase inhibitor esetyenziselwa unyango lwe-esrogen-receptor yesifo sengqondo somhlaza kwi-post-menopausal women. I-Formestane igxotha imveliso ye-estrogen evela kuma-anabolic steroids okanye i-prohormones. Isebenza njengeprohormone kwi-4-hydroxytestosterone, ...